Sheykh Xasan Daahir “Towxiidkii iyo Sunadii Nabiga ayay diidanyihiin markaas ayay leeyihiin waxaan Xusaynaa dhalashadiisa waa kuwa Bidco xoola uga cunaya Shacabka masaakiinta ah”. | Halganka Online
Sheykh Xasan Daahir “Towxiidkii iyo Sunadii Nabiga ayay diidanyihiin markaas ayay leeyihiin waxaan Xusaynaa dhalashadiisa waa kuwa Bidco xoola uga cunaya Shacabka masaakiinta ah”.
Posted on Febraayo 26, 2010 by halganka
Hogaamiyaha Urururka Xisbul Islaam Sheykh Xasan Daahir Aweys ayaa maanta ka hadlay arrimo badan oo ka taagan dalka Somalia sida dagaalada Jihaadka ah ee ka socda magaalada Muqdisho iyo khilaafaad laga yaabo in uu Mujaahidiinta soo kala dhaxgalo.
Mowliidka iyo hab dhaqanka Qabuura Galeenka Mushrikiinta+Sida Saxda ah.
Sheykh Xasan Daahir Aweys oo Boqolaal qof oo reer Muqdisho ah kula hadlayay gudaha Masjidka Abaa Hureya gudaha Suuqa Bakaaraha magaalada Muqdisho ayaa faah faahin ka bixiyay xaalka Qabuura Galeenka Mushrikiinta ah ee jooga degmooyin katirsan gobalka G/gaduud.
Wuxuu sheegay in aysan jirin cid si rasmiya u sheegi karta xiliga uu dhashay Nabi Muxamed Salalaahu CWS marka lagasoo tago Tawaariikh ay Mu’arikhiintu isku khilaafsanyihiin oo ah in uu dhashay 12-kii Rabiicul Awal 571 ML.
Sheykh Xasan wuxuu Toosh ku Ifiyay Khuraafaadka ay G/gaduud qaybo kamid ah ka wadaan Qabuura Galeenka Mushrikiinta ah oo uu ku tilmaamay “Towxiid diid suna diid ah” taas oo macnaheedu yahay “Mushrikiinimo” isagoona shacabkii dhegaysanayay u sheegay in kuwaasi ay halaag ku socdaan.
Isagoo ka hadlayay Ixtifaalka Bidcada ah ayuu yiri “waxaa leenahay maanta Dadka leh waan weynaynaa oo waan ku farxanyaa Mowliidka Towxiidkii iyo sunadii Nabiga ka cararaya dhalashadiisii way u dabaal degayaan oo xoolo ka cunayaan,waxaan u malaynayaa asalku waa in ay Dadka masaakiinta ah xoolo uga cunaan Nimanka nuucaas ah waxaa laga kari la’yahay Towxiidka qaatay waa Niman Shareeca diid ah oo Bidco iyo Khuraafaad wada”.
Wuxuu ku amaanay Ducaadda Soomaaliyeed sida ay dadka waxma garatada ah uga waaniyeen Bidcooyinkii iyo shirkiyaadkii ay samayn jireen xiliyada laga gaaro bisha Rabiicul Awal taas oo uu ah buu yiri isbedel ay Mujaahidiinta iyo ducaadda ka sameeyeen Koonfurta Somalia.
Gudoomiyaha dagaalyahanada Xisbul Islaam Sheykh Xasan daahir Aweys wuxuu ka hadlay arrin ay dadkii Masjidka joogay ay ka wada sugayeen ooba la dhihi karo waxay aheyd arrinta ay dadka oo dhan u diiday in ay masjidka ka baxaan salaadda kadib.
Somalida ayaa lagu tiriyaa in ay yihiin dad ka macaasha gacan ka hadalka u dhexeeya Awoodaha jira xiligaas waana dad wax Buun buuniya marka la eego qaabkii ay maalmahan u hadal hayeen dhacdooyin magaalada ka dhacayay.
Aweys wuxuu soo hadal qaaday dhacdooyin ka dhax dhici kara Mujaahidiinta halka saf uga wada jira Jihaadka ka dhanka ah Shisheeyaha iyo dowlada KMG iyo raadka ay leedahay midnimo la’aanta.
Wuxuu uga digay Xoogaga Mujaahidiinta ah Khilaaf soo kala dhaxgalay kaas oo aakhirkii keeni kara dagaal ka dhax dhaca kadibna uu cadawgu ka faa’iidaysto isdilka mujaahidiinta dhaxdooda ah.
“way dhici kartaa in dadka halka saf kuwada jira ay is khilaafaan maadaama aysan mar marka qaar isku si ahayn oo aan lamidaysnayn,sidaas darteed waxaan Mujaahidiinta uga digayaa in ay dhaxdooda dagaalamaan waa in ay alle ka baqaan oo Jihaadka lasii wado wixii latuhmana laga wada hadlo oo aan la kadsoomin”ayuu yiri Sheekh oo soo qaadanayay Aayado qur’aan ah oo muujinayay in Khabarka layska hubiyo marka dhacdo dhacdo taas oo uu ula jeeday in hadii Mujaahidiinta wax ka dhax dhacaan ay is xakameeyaan ilaa laga hubiyo.
Raali Gelin uu u jeediyay Shacabka Muqdisho oo ay Xisbigu waxyeeleeyeen.
Sheykh Xasan wuxuu ka hadlay dhibaatooyin ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaasi oo ay ka dhasheen dhibaatooyin shacabka gaaray sida wax laxumeeyay iyadoo wanaag ladoonayo iyo kuwa kale oo sheydaan sababay.
Wuxuu sheegay in dhankooda ay ka xunyihiin waxyaabo maalmihii lasoo dhaafay dhacayay islamarkaana ay shacabka ka raali gelinayaan wixii dhankooda ka dhacay isagoo aan si toos ah u sheegin dhacdooyinkii maalmihii lasoo dhaafay dhacayay.
Ugu dambayntii Sheykh Xasan Daahir Aweys ayaa rejo ka muujiyay in laga adkaan doono Cadawga Saliibiga Caaqidka ah ee kusoo duulay shacabka Soomaaliyeed balse loo baahanyahay sugnaan iyo sabar ku dhisan iskaalmaysi.
Hadalka Sheykh Xasan ayaa kusoo aadaya xilli Xisbul Islaam ay iska Eryeen Maxamed Macalin oo shaki iyo kala gayn ka dhax waday Shabaabul Mujaahidiin iyo Xisbul islaam oo dagaal dhan walba ah kula AMISOM iyo Dowlada KMG ah oo ay ku lamaansanyihiin Qabuura Galeenka Tikreega raacsan.
« Siminaar lagu baranayay Gowraca Sharciga ah oo ay Wilaayada Islaamiga Sh/Dhexe u qabatay Kawaanlayda iyo ganacsatada Hilibka magaalada Jowhar “Warbixin”. Ciidamada Cadawga AMISOM oo Sedax qof oo Dhalinyara ah ku Toogtay Xaafadda Sigaale magaalada Muqdisho. »
mohamed elmi, on Oktoobar 21, 2012 at 7:51 b said:
walaal anigu waxaan rac san ahay illahay simxanaa u tacalla nabiga mohamed scw baas ruun na waxaay ku dhex jiir ta quran ka karim ah
please read by carefull oki